अब रातको समयमा गाडी चलाउन नपाइने ! – Gandaki Voice
Home/देश/अब रातको समयमा गाडी चलाउन नपाइने !
अब रातको समयमा गाडी चलाउन नपाइने !
डोटी, २६ मंसिर ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को भ्रातृ सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन जिल्ला कमिटी डोटीले जिल्लामा रहेका सबै ग्रामीण सडकमा रातिको ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म गाडी चलाउन बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईलाई शुक्रबार एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
पोखराको बगरमा मगर बुढा मृत भेटिए